Degso IObit Uninstaller loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (24.00 MB)
Degso IObit Uninstaller,
IObit Uninstaller waa fure-bixiye aad isticmaali karto adiga oo aan u baahnayn lambar liisanka. Waxay ka mid tahay aaladaha bilaashka ah ee isticmaaleyaasha Windows PC ay u adeegsan karaan inay ku qabtaan dayactirka kombiyuutarka iyo barnaamijyada tirtirka oo aad uga fudud uguna dhaqso badan. Windows 10 waxaa loo isticmaalaa in lagu baabiiyo gaabiska iyo dhibaatooyinka ka dhasha isku soo wada duubashada barnaamijyada iyo xogta kumbuyuutarkaaga.
Soo dejiso IObit Uninstaller
Sababtoo ah markaad isticmaaleyso barnaamijka, waxay noqoneysaa suurtagal inaad ka saarto dhammaan barnaamijyada aan ku jirin liiska Add / saar Barnaamijyada Windows ama aan laga saari karin halkaas. Intaas waxaa sii dheer, waxaad si sahal ah uga saari kartaa kumbuyuutarka kumbuyuutarka Windows 8, 8.1, 10 barnaamijyadii horay loogu rakibay.
Adeegsiga PC-ga ee muddada-dheer, haraaga kumanaan barnaamijyo iyo barnaamijyo ah ayaa ku urursan diiwaanka kumbuyuutarka. Xitaa haddii barnaamijyada laga saaro nidaamka, haraagaani halkaas ayey ku sii jiraan, iyo IObit Uninstaller wax dhib ah kuma qabo bartilmaameedka haraadigan sidoo kale, iyagoo gacan ka geysanaya ilaalinta diiwaanka kombiyuutarka wixii aan loo baahnayn.
Haddii wax dhibaato ahi ka dhacaan kombiyuutarkaaga inta lagu jiro barnaamijka tirtirka ama nadiifinta diiwaanka, barnaamijka, kaas oo kuu oggolaanaya inaad si otomaatig ah u abuurto dhibic soo celin nidaam ah si aad uga soo kabato dhibaatooyinkaas, waxay u shaqeysaa si deggan oo aadan u baahnayn shaqadan.
Mararka qaar cusbooneysiinta Windows-ku waxay sababi karaan dhibaatooyin, gaar ahaan kumbuyuutarradii hore, sidaa darteed dadka isticmaala waxay rabaan inay ka takhalusaan cusboonaysiintaan. Waxa kale oo aad ka saari kartaa cusbooneysiinta dhibaatooyinka ku keena kombuyuutarkaaga adoo adeegsanaya barnaamijka tirtirka Windows Update ee IObit Uninstaller.
Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa barnaamijka si aad uga saarto waxyaabo lagu daro oo waxyeelo u leh oo si uun u saameeya biraawsarkaaga oo aan lagaa saari karin. Kuwaas waxaa ka mid ah, waxaa macquul ah inaad la kulanto xaalado kala duwan oo fara badan, laga bilaabo kuwa isku badala bogga hore kuwa bedelaya mashiinka raadinta ama isku dayaya inay xadaan macluumaadkaaga shakhsiyeed, marka waxaad u baahan tahay inaad ka nadiifiso nidaamkaaga sida ugu dhakhsaha badan.
Maxaa ku cusub nooca ugu dambeeya ee IObit Uninstaller;
Raadinta / Rakibaadda Raadinta: Waxaa la hagaajiyay diiwaanno badan oo habka rakibaadda ah sida adeegyo cusub, hawlgallo qorshaysan, faylasha DDL.
Caafimaadka Software-ka: Waxaa la wanaajiyay ka saarista barnaamijka hadhaaga iyo fiilooyinka xumaanta ah.
Ka tirtir algorithm: Aqoonsiga saxda ah ee loogu talagalay barnaamijyada yar ee la isticmaalay iyo barnaamijyada isku duuban
Ka tirtir barnaamijyada aan la tirtiri karin: Ka tirtir barnaamijyada adag ee madaxa adag sida MPC-HC, IntelliJ IDEA, Rockstar Games.
Xaqiiqda ah in lagu heli karo bilaash oo ay la timaaddo is-dhexgal aad u fudud in la isticmaalo ayaa ka dhigaysa qalab aad u qiimo badan oo ka dhex jira kuwa aan fasixin. Haddii aad u aragto barnaamijka caadiga ah ee ka saarista ee Windows mid aan waxtar lahayn oo aad raadineyso xalka xagjirka ah, waa inuu hubaal ka mid ahaado codsiyada dayactirka nidaamka ee ay tahay inaad ku haysato kombiyuutaradaada.
IObit Uninstaller Noocyada
Cabirka Faylka: 24.00 MB